Maxkamada Sare ee Wadanka Sucuudiga oo ku Dhawaaqday Maalinta Ciida Carafo | Hawraar
Maxkamada Sare ee Wadanka Sucuudiga oo ku Dhawaaqday Maalinta Ciida Carafo
Maxkamada sare ee dalka Boqortooyada Sucuudi Arabiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday wakhtiga ciida Carafo, ku beegan tahay, maalinta xujaajtu istaagi doonaan buurta Carafo ee Yoomul Wuquufka iyo waliba bilashada bisha Dul Xij intaba.
Sida wakaaladaha wararku ku warameen, Maxkamada sare ee dalka Sucuudiga ayaa ugu horayn cadaysay, bilashada bisha Dul Xij in si rasmi ah loo cadeeyay inay Khamiista maanta ah kow tahay, oo ay bilatay xalay.
Waxa kale oo ay maxkamadu cadaysay in Maalinta Jimcaha ee 3-da October 2014-ku, noqon doonto maalinta Wuquufka Carafo, Maalinta Xujaajtu istaagi doonaan buurta Carafo, oo ah rukniga ugu wayn ee gudashada waajibaadka xajka.
Sida bayaankan lagu cadeeyay Maalinta Sabtida ee ku beegan 4-ta October 2014-ka ayaa noqon doona maalinta ugu horaysay ee Ciidal Carafo, sidaa awgeed waxa ay Maxkamadu umadaha Islaamka ee dunida guudkeeda u rejaysay inay nabad iyo iimaan ku gaadhaan, farxad iyo camal barakaysana ku ciidaan.
Maxkamada Sare ee dalka Sucuudiga ayaa ah marjaca ugu danbeeyay ee rasmiyan u shaacisa bilashada bisha Dul Xij iyo wakhtiga ay ku beegmayso ciida Carafo iyo istaaga buurta Carafo ee xujaajta, waxaana wakhtiga ay shaacisaa noqdaa mid si rasmi ah looga dhaqmo dhamaan dunida Islaamka ah oo dhan.